ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: သည်.. အခန်း
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား)6September 2014 at 17:18
ဒီလုိုကြီး ပြီးသွားတော့ စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး။ အခုထက်ထိ အဲဒီအတုိုင်းခံစားနေရတယ်ဆုိုတဲ့သဘော သက်ရောက်နေတယ်။ ဆက်လုို့ရရင် ဆက်ရေးစေချင်ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့။ ဘ၀သရုပ်ဖော်လေးမုို့ သံဝေဂတရား ဖြစ်ပွါးမိတယ်။ နိမ့်တုံ မြင့်တုံ၊ ရေစီးတစ်ခါ ရေသာတစ်လှည့်ဆုိုသလုိုပေါ့။ တကယ် တရားရစရာကြီးနော်။
ဆွေလေးမွန်6September 2014 at 22:54
ဟုတ်သူကြီး မင်း ကြိုးစားကြည့်ပမယ်.
mabaydar6September 2014 at 22:31
ကိုယ်တိုင် မကြုံဖူးသေးပဲနဲ့ တွေ့ဖူး မြင်ဖူး ကြားဖူးတာတွေရယ် ကိုယ်အတွေးရယ်ပေါင်းပြီး ဒီလို သရုပ်ဖော်နိုင်တာ သိပ်တော်တာပဲ... BPP challenge အတွက်ကတော့ ရေးလက်စ ခရီးသွားပိုစ့်ပဲ ဆက်ရေးရမှာပဲ... ဟီး.. သတိတရရှိလို့ ကျေးဇူး...
ဆွေလေးမွန်6September 2014 at 22:52
သက်ဝေ6September 2014 at 22:49
စာရေးကောင်းတဲ့ ညီမလေးပဲ... အဖွင့် အပိတ်ကလေး နည်းနည်းထပ်ဖြည့်လိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမှာ...
Tag လေးကို ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော် ညီမ... <3
ဆွေလေးမွန်6September 2014 at 22:53
အခုလို သင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူး အစ်မ သက်ဝေ. တစ်ကယ်က ခုဖျားနေတာ.. နားစည်ရောင်ပြီး ကောင်းကောင်းမကြားရဘူး.. ဟီး ..၀ါသနုာပိုးကို အဖျားပိုး မနိုင်ပါလေ
စံပယ်ချို6September 2014 at 23:41
ဂျက်က မအိုခင်နာနေရတယ် ကံကောင်းခြင်းတွေ ဘုရားသခင်သိမ်းထားတယ်ထင်တာပဲ
ဒီလိုနာတဲ့သူအများကလဲ စကားပြောဖော် တီးတိုးဖော်ကိုမျော်ကြတတ်တယ် ဟုတ်တာပေါ့
ဆုတောင်းမိတယ် လူတိုင်းအဖော်ကောင်းလေးနဲ့လက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ အိုတဲ့အချိန် နာတဲ့အချိန် အဖော်ကောင်းလေးရှိတော့နဲနဲ သက်သာတယ်လေ ရေးပေးတာကိုပဲကျေးဇူးပါဆွေလေးရေ
ဆွေလေးမွန်7September 2014 at 01:21
ဂျက် ရေ .. ကျန်းမာရေးဂ၇ုစိုက်..ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတယ်
အလင်းသစ်7September 2014 at 02:15
ခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့ ကျွန်တော့်အဘွားကိုတောင် သတိရသွားတယ်အမရေ ... ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး သူ့ကိုအရင်ထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ သတိရသွားတယ် ...
ဆွေလေးမွန်7September 2014 at 20:01
လာရောက်လည်ပတ်ကြောင်း ခြေရာလေးထားခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါ အလင်းသစ်ရေ
blackroze7September 2014 at 11:58
ဖတ်ပြီးတော့မွန်းကျပ် သွားတယ်အမရယ်..အဲလိုလူမျိုး အပြင်မှာတွေ့ဖူးတယ်..
အမေလုပ်တဲ့သူက သားကို သူသဘောကျတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ပေးစားတယ်..
မိန်းကလေးက အမအခုရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက တူမမိသီ လိုပုံစံ..အဘွားကြီးကလေဖြတ်ထားတော့
ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး ...အိမ်ဖော်က အိမ်အလုပ်မြန်မြန်ပြီးအောင်ထမင်း အတင်း
ထိုးကျွေးနေကြ..ထမင်းနင်ပြီး သေတာ.. အဲဒီချွေးမ လုပ်သူရဲ့အဒေါ်တွေက သူ့တူမ စနက်နဲ့
သေတာကို သားဖြစ်သူကသိရင် ပြသနာ တက်မှာဆိုးလို့ အဘွားကြီး သူ့ဘာသူ ထမင်းစားရင်
ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ပြီးသေတာပါလို့ ဆရာဝန်စီငိုကြီးချက်မနဲ့ အတင်းလိုက်တောင်းပန်ပြီး
ဖုံးတာပေါ့ ။ သားဖြစ်တဲ့သူက ဘာမှမသိဘူး...အခုတော့ အဲဒီမိန်းကလေးချမ်းသာနေလိုက်တာများ
ကျိကျိတက်..မင်္ဂလာဈေးက သူဌေးတွေလေ..ယောက်ကျားက သူ့မိန်းမ လက်ချက်နဲ့သူ့အမေ ထမင်းနင်ပြီး
ဆွေလေးမွန်7September 2014 at 20:02
ညီမလေးပစ်ပစ်ရေ..ဒီလိုပါပဲ တွေ့ရဖန်များလို့ အမလဲ စိတ်ကူးပြီးရေးမိတာ
Aunty Tint7September 2014 at 15:30
ဖတ်သွားပြီ မွန်လေးရေ.. ဘ၀ရဲ့ကြုံတွေ့တတ်တဲ့ သဘာဝတရားလေးတွေရဲ့ သရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းလေးလို့ ခံစားမိတယ်။ စာရေးကောင်းတော့ ဖတ်ရင်းစီးမျောသွားတယ်။
စကားမစပ် မွန်လေးဆီကနေ တီတင့်မှာမရှိတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ အများကြီးရလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ဆွေလေးမွန်7September 2014 at 20:04
ဖတ်ရင်းစီးမျောသွားတယ်ဆိုလို့ ဆွေလေးသွားကြီးဖြီး..ဟဲဟဲ ..သူကြီးမင်းက တစ်ခြားဘလော့လေးတွေပါ tag ပါဆိုလို့ ကိုယ်သိနေတဲ့ အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီးတွေက Tag ထားပြီးပြီလေ..အဲသဟာကြောင့် ခုမှတွေ့တယ် ဘလော့လေးတွေကို tag လုပ်ပေးထားတာ.
မဒမ်ကိုး 8 September 2014 at 19:58
ဆွေလေးမွန် 11 September 2014 at 20:14
မဒမ်ရယ် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ ဘ၀တွေ မဟုတ်လား
Unknown 17 September 2014 at 00:42
challenge ပိုစ့်လေးရေးပြီးပါပြီချစ်မရယ်..။ challenge လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရော သတိရတဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါနော်..။